Hantida Maalgelinta ee Packard Foundation
Laga soo bilaabo horudhac:
David iyo Lucile Packard Foundation ayaa ahaa horjooge horay u ahaa hawlgallada maalgashiga. Laga soo bilaabo 1980, aasaasku wuxuu ka dhigay $ 750 milyan oo ah maal-galinta Barnaamijka La Xiriira Barnaamijyada (PRIs) qaabka amaahda, maalgashiga, iyo damaanada. Tan iyo markii ugu horeysay ee PRI, habka aasaaska ee hay'adda maalgalinta mashaariicda ayaa si wayn u kobcisay. Maaddaama ay saameynteeda saameyn ku yeelatay maalgashiga maalgashiga ayaa koray oo qaangaadhay, waxa kale oo uu hormariyay awoodda uu ku leeyahay Maal-galinta Miisaaniyadda (MRIs), waxana uu diyaar u yahay inuu isticmaalo ujeeddada ujeedada maalgelinta ay keeni doonto saameynta ugu weyn.
Foundation Packard waxay waydiisatay Redstone Strategy Group in ay ka caawiso dukumiintiyada ka soo baxa qaar ka mid ah Farsamooyinka cusub ee aasaasiga ah ee PRI - khibradaha ka soo jiiday Hay'adda ka baxsan dhulka iyo xarumaha PRIs ee calaamadiyay maal-galintoodii hore. Redstone waxay wareysi la yeelatay shaqaalaha Packard Foundation, maalgashadayaasha, maalgashadayaasha, iyo hoggaamiyeyaasha hawlaha maalgelinta barnaamijyada oo ay ku jiraan mashaariic fara badan oo ku saabsan waxa si fiican u shaqeeyay, waxa aan qabin, iyo caqabadaha horyaala Packard Foundation iyo garoonka. Shaqaalaha Hay'adda waxay ka wada hadleen khibradahaas iyo duruusta soo socota si ay gacan uga geystaan hagista hawshooda maalgelinta hore.
Warbixintan waxay ka bilaabantaa sheeko gaaban oo ku saabsan taariikhda Aasaaska iyo habka loo marayo ujeeddada maalgashiga, dabadeedna tilmaamayso casharadii soo baxay. Waxay xireysaa qaar ka mid ah su'aalaha ugu adag ee ku haray Packard Foundation iyo berriga sida qiimaha iyo xaddidaadda ujeedada maalgashatada inay noqoto mid feejigan.